Maalinta: Meey 28, 2018
Diyarbakir Ergani Waa Gaadiidka Dadwaynaha Cusub ee loo maro Salihli Deriska
Degmada Diyarbakir waxay leedahay adeegyo gaadiid oo sahlan oo raaxo leh muwaadiniinta iyagoo furaya wadooyin cusub xaafadaha oo aysan horay u jirin adeegga gaadiidka dadweynaha. Gaadiidka dadweynaha oo ku habboon oo raaxo leh [More ...]
Nalalka iyo Tareenka Topsöğüt Iskudheg
Howlihii wanaagsanaa ee wadada Topsöğüt overpon ee Alparslan Türkeş Boulevard, oo lala kaashaday degmada Malatya Metropolitan District - TCDD, ayaa sidoo kale si aad ah loo soo gabagabeeyey. Xadgudubka TCDD; kaabayaasha, [More ...]
70 Kiloomitir Gaadiidka Isticmaalka Dibloomada ee Istanbul Is Diiwaangelinta
Hantidhowrka go'aaminta waddada cusub ee 70 kilomitir mitir ayaa loo sameynayaa Istanbul iyo diyaarinta mashaariicdeeda waa la joojiyay. SözcüSida uu sheegayo Özlem GÜVEMLİ, Waaxda Qorsheynta Gaadiidka Magaalada Istanbul ee Magaalada Caasimadda ah, Istanbul guud ahaan [More ...]
Dhibaatada Karnıyarık ee soo afjartay Duqa Magaaladda Adana Metropolitan Hüseyin Oral, D-400'de si loo yareeyo taraafikada ayaa bilaabay tallaabada labaad ee xasaasiga ah. Hüseyin Sözlü, Duqa Magaalada Adasa Magaalo Weyn, taraafikada Wadada 'D-400 Highway' oo gaadiid ka siisa jihada bari-galbeed. [More ...]
Midowga Degmooyinka Dunida Turkiga (TDBB) iyo Duqa Kocaeli İbrahim Karaosmanoğlu ayaa booqday Magna Otomotiv, oo xaruntiisu tahay Kanada oo u shaqeysa sidii shirkad bixiyaha koowaad ee adduunka ee warshadaha gawaarida sahaminta gawaarida. 1 [More ...]
Tamashoon Sawirada Bariga Qaranka ee Sawirka Qaranka ayaa billaaban
Sida saxda ah ee tartanka tartanka sawir qaran ee East Express wuxuu bilaabmayaa: Tartan waxaa lagu abaalmarin doonaa sawirrada laga qaaday wadada East Express waxaana marti ku ah TCDD Transportation Inc. iyada oo laga duulayo Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta. [More ...]
Gaadiidka dadweynaha oo bilaash ah oo loogu talagalay rakaabka tareenada masaafada dheer ee Jarmalka
Waddooyinka tareenka ee Jarmalka ayaa qorshaynaya inay bilaabaan arji tigidh bilaash ah oo loogu talagalay safarada magaalooyinka. Sida ku xusan codsigan Railways-ka Jarmalka, kuwa ku safra tareennada masaafo ahaan 100 kiiloomitir iyo masaafooyin intaa ka badan, bas, taraam, metro iyo [More ...]
8 Dib u eegista Sirkeci-Kazlıçeşme Qadka Bannaanka Hore
TCDD waxay cusboonaysiin doontaa khadka qadiimka ah ee magaalada u dhexeeya Sirkeci-Kazlıçeşme, oo qiyaastii u jirta 8 kiiloomitir, oo aan shaqeynin mashruuca Marmaray. TCDD waxay qaban doontaa hindise 26 bisha Juun ee qadkaan. Sida ku xusan qandaraaska, saldhigyada qaar waa la wareejiyay. [More ...]
Kamislo Boulevard ayaa lagu rasaaseeyay Diyarbakir
Diyarbakir Dawlada Hoose ee Magaaladda, oo furtay xiliyadii bishii Abriil iyada oo bartilmaameedsaneysa 2018 kun oo tan oo raashiin ah jidadka ku yaal bartamaha magaalada 800, ayaa xardhaysa Kamışlo Boulevard, oo loo yaqaan habka hab maamuuska marka loo eego baaxadda shaqooyinka. 2018 waxay bixisaa marin bilaash ah wadooyinka magaalada [More ...]
Guddoomiyaha Gobollada, Heerka Isgoyska Dib ayaa loo xidhay
Iyada oo la xiray isugeyn heer degmo ah oo ku taal degmada Yeşiltepe, ayaa muwaadiniinta ku nool gobolka ay bilaabeen inay dhibaatooyin kale mar kale yeeshaan, halka gudoomiyaha gobolka Cali Kaban uu arinta ka fiirsaday oo gacanta ku dhigay marinka sidii hore. [More ...]
Khadkii tareenka ee loo kordhiyay Isbitaalka Magaalada ayaa lagu daray. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in khadkaasi uu aadayo Suldare, Duqa Magaalada Büyükerşen wuxuu yiri, ümüz Waxaan ballan qaadnay inaan sameyn doono. Kordhinta khadka taraamka ee ku saleysan 130 maalin kasta rakaabka ee Eskişehir [More ...]
Maddaarka cusub ee Istanbul 26
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, wuxuu indha indheyn ku sameeyay Wadada Waqooyiga Marmara, oo dhismaheeda uu socdo. Natiijooyinka ka dhashay dadaalada lagu doonayo in lagu fududeeyo gelitaanka garoonka cusub, waxaa jiri doona waddo dhan wadooyinka 26 ee hareeraha garoonka. [More ...]
RayHaber 28.05.2018 Warbixinta Shirka
Malatya Çetinkaya Line Bridges Korontada iyo Dayactirka ayaa la sameyn doonaa
Asphalt Metropolitan Asphalt Around Akhisar Stadium
Dowladda Hoose ee Magaalada Manisa waxay sii wadataa howdka batroolka ee gobolka oo dhan iyada oo aan carqalad laga gaarin howlaha asphalt ee ka socda agagaaraha Isboortiga Toto Akhisar. Fevzi Demir, Madaxa Dhismaha Wadooyinka iyo Dayactirka, [More ...]